किसानलाई रु ६३ लाख अनुदान - Dainik Nepal
बुधबार, ४ पुष २०७५
कञ्चनपुर, २५ साउन । कृष्णपुर नगरपालिकाका किसानलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पकेट क्षेत्र र ब्लक उत्पादन कार्यक्रमका लागि रु ६३ लाख अनुदान दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । किसानलाई ६ वटा धान पकेट कार्यक्रमका लागि रु १६ लाख ५० हजार उपलबध गराइएको छ । दुई पकेट क्षेत्रका लागि रु दुई लाख २५ हजारका दरले तथा चार पकेट क्षेत्रका लागि रु तीन लाखका दरले अनुदान प्रदान गरिएको नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख बिन्दु कँुवरले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै तीन तरकारी पकेट क्षेत्रका लागि रु सात लाख ५० हजार अनुदान दिइएको छ । केरा पकेट क्षेत्रका लागि रु तीन लाख तथा तरकारी ब्लकका लागि रु ३३ लाख उपलब्ध गराइएको छ । सो अनुदान रकमबाट किसानले कृषि औजार, बीउबिजन, मलखाद, विषादीलगायत सामग्री खरिद गरेका छन् ।
“यसले धान, केरा र तरकारीको उत्पादनमा वृद्धि हुनाका सिाथै किसानक आत्मनिर्भर हुनेछन्,” कुँवरले भन्नुभयो । उक्त नगरपालिकामा आव २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पकेट र ब्लक क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । –रासस
सल्यानमा स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा सेवा ठप्प, निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलित
मानवअधिकार आयोगको ५ नं. प्रदेश कार्यालयमा तीन वटा मात्रै उजूरी
डा.तुलसी गिरीको निधनबाट प्रधानमन्त्री ओली दुःखी
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ‘मिनी सभा’
प्रधान सेनापति थापाको मनोपोलीविरुद्ध रक्षा र सर्वोच्चमा उजुरीका चाङ
प्रचण्ड क्याम्प छिरेका पाण्डेको नेता नेपाललाई सुझाव– सुनपानी छर्कनुस्, कामरेड !
मन्त्री बदनाम गराउँदै खानेपानी सचिव ठाकुर, कमिशनमात्रै खोज्छन् !
वायुसेवा निगमको प्रवक्तामा क्याप्टेन विजय लामा
खाना समयमै खाने कि भोक लागेपछि ? थाहा पाउनुुस् भोजनको नियम
अधिकांश स्थानीय तहमा सकियो कर्मचारी समायोजन
पूर्वप्रधानमन्त्री डा गिरीको विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि
‘गोपी’को ट्रेलर सार्वजनिक (हेर्नुस् भिडियो)
एनआईसी एशिया बैंकको २१ औं वार्षिक साधारण सभा
विकासका लागि आवश्यक बजेट छ : मुख्यमन्त्री पौडेल